Fa maninona no tsy nampihatra CMS ny orinasanao? | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 17, 2009 Sabotsy, Oktobra 24, 2020 Douglas Karr
Betsaka ny fifanakalozan-kevitra ato amin'ity bilaogy ity momba ny fanatsarana, ny fanatsarana ny fiovam-po, ny varotra miditra, ny fanatsarana ny motera fikarohana… fanandramana multivariate sy fanatsarana ny pejy fitobiana. Indraindray isika dia manadino fa maro ny tranokala mbola tany amin'ny taona 1990 ary pejy HTML manana kaody sarotra mipetraka tsy miova amin'ny mpizara!
Niditra tao amin'ny FTP aho, nisintona ny rakitra ary nanao ny fanovana ilaina amin'ny alàlan'ny Dreamweaver. Notantaraiko tamin'izy ireo avy eo fa tena tsy ilaina izany asa rehetra izany. Mpanjifa hafa vao haingana no nandefa ny mpivarotra tamina fiofanana HTML hahafahan'izy ireo manavao ny tranokalany. Tsy nilaina koa io. Na dia manampy aza ny fahalalana ny haitao tranonkala, ny rafi-pitantanana atiny tsara dia afaka manome ny fitaovana rehetra ilainao hitazomana ny tranokalanao isan'andro na dia esorinao aza ireo sakana ara-panabeazana sy ara-teknika.
Ho an'ny vidin'ny kilasy na ny fandoavam-bola mitohy amin'ny ilay bandy web, ireo orinasa ireo dia afaka nametraka rafitra fitantanana atiny matanjaka izay azon'izy ireo fehezina.
Ho an'ny mpanjifa toy izany, Paper-Lite, a mpamatsy rafitra fitantanana antontan-taratasy, nampiasa WordPress izahay. Misy vahaolana hafa momba ny fitantanana votoaty hafa eny an-tsena, saingy ity dia nisy lakolosy sy sioka rehetra ary mora nifanaraka tamin'ny fitakian'ny mpanjifa.
Saika ny mpitan-tserasera rehetra izao dia manolotra ny rafi-pitantanana atiny na mametraka rafitra fitantanana votoaty hafa. Ny torohevitra tokana ananako dia ny hifikitra amin'ny sehatra iray izay misy fananganana be mpampiasa sy vondrom-piarahamonina fampandrosoana lehibe miaraka aminy.
Tadidio fa ny fametrahana CMS maimaim-poana dia tsy maimaim-poana. Ilaina ny fanavaozana ny fikojakojana! Ny maha-zazalahy lehibe eo amin'ny sakana CMS maimaim-poana koa dia manome trosa amin'ireo mpanao heloka bevava maro manandrana hack ny sehatrao. Ny CMS maimaim-poana atolotra amin'ny sehatra fampiantranoana mora dia tsy hahatanty fifamoivoizana taonina ihany koa - mitaky anao manatsara ny fotodrafitrasao.
Ny tombony dia mihoatra ny risika raha toa ianao ka misy lehilahy mora raisina mba hitazomana ny CMS ho salama. Miaraka amin'ny fametrahana sy ny fametrahana ny CMS:
Nanao back-end izahay fanatsarana ny motera fikarohana miaraka amin'ny plugins sy famolavolana lohahevitra mety.
We namboarina ny pejy fidirana afaka nanao izany ny mpanjifany midira ary jereo ny atiny voafetra.
Nanamboatra sy nanamboatra a plugin plugin hanodinana ny nitanisa ny mpanjifa eo amin'ny pejy fandraisana.
Nividy sy nametraka a vahaolana matanjaka endrika hahafahan'izy ireo misambotra fitarihana marketing any anaty.
Nohavaozinay ny fisie htaccess hanesorana ireo rohy taloha mankany amin'ny làlana vaovao amin'ny atiny iray ihany. Nametraka koa izahay a redirection plugin hikirakira ny fitakiana fanodinana fanampiny. Ity dia dingana matetika tsy raharahi-maso avy amin'ny mpamorona tranonkala ary afaka mamono ny fanatsaranao. Hamarino tsara fa mbola mandeha foana ny rohy taloha… atoroy fotsiny ny atiny vaovao!
Nametraka lohahevitra sy plugins izahay mba hahafahan'ny tranonkala mandanjalanja tsara iPhone, iPod touch ary fitaovana finday hafa. Mampiasa fitaovana finday ny olona hijerena tranonkala bebe kokoa… azo vakiana amin'ireo fitaovana ireo ve ny tranokalanao?
Namboarinay breadcrumbs amin'ny ampahan'ny tranokala misy fitetezana lalina hahafahan'ny mpanjifa mivezivezy mora kokoa.
Mazava ho azy fa nanamboatra Webmasters, plugins Stats ary Analytics koa izahay mba hahafahan'ny orinasa manara-maso ny fifamoivoizany.
Ny tena zava-dehibe indrindra angamba dia manohy manampy ny orinasa hanaiky ilay sehatra vaovao izahay ary hampiasa azy io amin'ny fomba mandaitra. Ny CMS toa ny WordPress dia mety ho somary mampatahotra ihany amin'ny voalohany. Azoko antoka fa mora kokoa noho ny manazava ny FTP sy ny HTML anefa ianao!
Farany, na dia sehatra fitorahana bilaogy mendrika aza ny WordPress, mino aho fa izy io dia rafitra fitantanana atiny anaty tranonkala tsara kokoa. Misy rindrambaiko ho toy ny vahaolana amin'ny serivisy toa Marketpath izay manolotra ny fitantanana tranokala, fitorahana bilaogy ary koa ny ecommerce.
Tags: CMSfitantanana votoatyrafitra fitantanana atinyContent Marketing
21 Oktobra 2009 à 12:42
Na dia nanana traikefa mitovy amin'izany aza aho tamin'ireo tompona orinasa maro nanao izany tamin'ny fomba nanaovana azy tamin'ny taonjato lasa, dia marina koa izany:
"Ny CMS toa ny WordPress dia mety ho sahiran-tsaina amin'ny voalohany."
Ny tompona orinasa madinika, indrindra, dia mahita asa be loatra ny CMS. Be loatra ny tokony hotsaroana raha sahirana amin'ny fampandehanana ny orinasanao ianao ary mandefa zava-baovao indraindray. Rehefa mampiasa ny CMS indray ianao dia adinonao ny fomba hanaovana izany. Ary iza no te hamaky boky?
Ny WordPress dia azo antoka fa tsara lavitra noho ny Joomla na Drupal amin'ny resaka fampiasana admin ankapobeny. Ny workflow dia intuitive kokoa raha oharina amin'ny roa hafa.
Inona no traikefanao tamin'ny CMS ho an'ny tompona orinasa madinika? Efa nanandrana fomba hafa "tsotra" ve ianao?